POLITICAL NEWS 10 - Nepal news headlines | breaking news kathmandu | national news of nepal live
नेपाली भूमि अतिक्रणविरुद्ध तत्काल कदम चाल्नुपर्छ: प्रवक्ता श्रेष्ठ
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाली भूमिमा भारतले सडक बनाएको विषयमा सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन् । पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका प्रवक्ता श्रेष्ठले भारतले अनाधिकृतरुपमा कब्जा गरेको र आफँले समेत विवादित भनी स्वीकार गरेको पश्चिम सीमाक्षेत्रमा सडक बनाएकामा आपत्ति प्रकट गर्दै सो माग गरेका हुन् ।
सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा शनिबार ट्वीट गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले भने,“नेपाली भूमिमा सडक बनाई शुक्रबार उद्घाटन गरेको कार्यप्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्दै भत्र्सना गर्दछु ।” उनले हामी सबै कोरोनाविरुद्ध लडिरहेको अवस्थामा गरिएको यो अतिक्रमणविरुद्ध सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
भारतले एकतर्फीरूपमा नेपालको भूगोलमा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीबाट चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडक ट्र्याकको उद्घाटन गरेको समाचारले दुई मित्रराष्ट्रबीच थाती रहेको लिपुलेक कालापानी विवादलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराएको छ ।
भारतका संघीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले शुक्रबार ट्वीट गर्दै अब भारतीय तीर्थयात्रीलाई मानसरोवरको यात्रा गर्न सहज हुने भन्दै प्रसन्नता व्यक्त गरेका थिए । नेपाल सरकारले नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरिएकोबारे स्पष्ट विवरण नदिन दूतावासमार्फत आग्रह गरिएको स्पष्ट पारेको छ । यसैविषयमा शनिबार परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर नेपाली भुमिमा गतिविधि नगर्न भारत सरकारलाइ आग्रह समेत गरेको छ ।
यसअघि भारत सरकारले नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा विभिन्न सैनिक असैनिक गतिविधि गरिआएको छ । भारतले सो क्षेत्रलाई आफ्नो क्षेत्रमा गाभी नक्सा सार्र्वजनिक गरेपछि सरकारले केहीअघि आपत्ति जनाएको थियो ।––रासस
भारतले लिपुलेक र कालापानीमा सडक बनाएको विरोधमा दूतावास अगाडि प्रदर्शन गर्ने ३३ विद्यार्थी पक्राउ
नेपाली भूमिमा भारतले सडक बनाएको भन्दै त्यसको विरोधमा यहाँस्थित भारतीय दूतावास अगाडि प्रदर्शनमा उत्रिएका ३३ विद्यार्थीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । लकडाउन उल्लङ्घन गरेकाले उनीहरुलाई आज पक्राउ गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्यामलाल ज्ञवालीले जानकारी दिए । विद्यार्थी राष्ट्रिय झण्डासहित प्लेकार्ड बोकेर सो दूतावास अगाडि प्रदर्शन गर्न पुगेका थिए ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकट विद्यार्थीले यसरी प्रदर्शन गरेको जनाइएको छ । सोही क्रममा विद्यार्थी नेता सुदेश पराजुली, यशु लामा, महेश श्रेष्ठ, अशोक थापा, मेघनाथ चापागाईंलगायत पक्राउ परेका हुन् । नेपालको भूगोलमा रहेका लिपुलेक, कालापानीबाट चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडक ट्र्याकको शुक्रबार उद्घाटन गरेको समाचार भारतका संघीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले ट्वीटमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए ।
यसबारे परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सो क्षेत्रमा पछिल्लो भारतीय गतिविधिबारे जानकारी पाएको र यसबारे स्पष्ट विवरण दिन भारतीय दूतावासमार्फत भारत सरकारसमक्ष माग गरिएको बताएका थिए ।
त्यसैगरि विरोध प्रदर्शनका क्रममा माइतीघरमा समेत प्रदर्शन गरिएको छ । भारत सरकारको उक्त कदम विरुद्ध प्रदर्शन गर्न माइतीघर पुगेको युवाहरुको समूहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । नाराबाजी गर्दै माइतिघर पुगेका युवाहरुलाई त्यहाँ नपुग्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
उनीहरुले ‘ओली सरकार राजिनामा दे, हाम्रो भूमि प्राणभन्दा प्यारो छ । भारतीय विस्तारबाद मुर्दावाद, लिपुलेक हाम्रै हो भन्दै नाराबाजी’ गरेका थिए । ––रासस
लिपुलेक कालापानीबारे सरकार सजग छ: परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली
भारतले एकतर्फी रूपमा नेपालको भूगोलमा रहेको लिपुलेक कालापानीबाट चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडक ट्रयाकको उद्घाटन गरेको समाचारले दुई मित्रराष्ट्र बीच थाती रहेको लिपुलेक कालापानी विवादलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराएको छ । भारतका संघीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले आज ट्विट गर्दै अब भारतीय तीर्थयात्रीलाई मानसरोवरको यात्रा गर्न सहज हुने भन्दै प्रसन्नता व्यक्त गरेका थिए ।
यसअघि भारत सरकारले नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्ने लिपुलेक कालापानी क्षेत्रमा विभिन्न सैनिक असैनिक गतिविधि गरिआएको छ । भारतले सो क्षेत्रलाई आफ्नो क्षेत्रमा गाभी नक्शा सार्वजानिक गरेपछि नेपाल सरकारले केही अघि आपत्ति जनाएको थियो ।––रासस
लिपुलेक हुँदै चीन जोड्ने सडक उदघाटन
भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतमा रहेको धार्मिकस्थल मानसरोवर जाने सडक मार्ग खोलेको छ । भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले चीनको भूमिसँग जोड्ने गरी निर्माण गरेको गर्वाधार लिपुलेक सडकको शुक्रबार उद्घाटन गरेको उनको ट्विटरबाट थाहा भएको छ ।
कैलाश मानसरोवर जोड्ने गरी निर्माण गरिएको बहुप्रतिष्ठित सडकको शुक्रबार भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत रक्षामन्त्री सिंहले उदघाटन गरेका हुन् । मानसरोवर यात्राको लिंकरोडको उदघाटन गर्न पाउँदा खुशी छु’, उनले ट्वििट गरेका छन् , ‘बिआरओ (बोर्डर रोड अर्गनाइजेशन) ले धार्चुलादेखि लिपुलेक चीन सीमासम्म कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्गको रूपमा चिनिने सडक जोडेको छ ।’रक्षामन्त्री सिंहले सीमासम्म सडक जोड्नु भारतको ठूलो उपलब्धि भएको उल्लेख गरेका छन् यो सडकले स्थानीय र व्यापारीलाई सुविधा पुग्ने उनको विश्वास छ ।
भारत चीनबीच व्यापारका लागि यो सडक मार्ग महत्वपूर्ण रहेको भारतीय अनलाइन संस्करण अमर उजालाले उल्लेख गरेको छ ।
तावाघाटदेखि लिपुलेकसम्मको सडकको ट्र्याक खुलेसँगै अब भारतीयको पैदलयात्राको अन्त्य भएको भारतीय अनलाइन संस्करणले जनाएका छन् । उता चीनले लिपुलेकसम्म सन् २००८ मा सडक पु¥याएको छ ट्र्याक खुलेसँगै व्यापारमा सहजता आउने धार्चुलाका वरिष्ठ व्यापारी खिमानन्द भट्टले बताए । उनले भने,‘सडकको ट्रयाक खुलेसँगै चीनसँगको कारोवार बढ्ने विश्वास छ । ’
धार्चुलाका एसडिएम अनिलकुमार शुक्लाले यस वर्ष सडक खुले पनि कोरोना भाइरसका कारण चीनसँगको व्यापार हुने सम्भावना नरहेको बताए । भारतबाट चीनसम्म गुड़, मिश्री, दन, कालीन, सलाइ, आल्मोनियमका भाँडाकुँडा, बाँसका डन्डा, पिठोलगायत निर्यात हुने गरेको छ ।
व्यासवासी योगेश बोहरा चीनले यसअघि नै सडक पु¥याइसकेका अवस्थामा भारतले अहिले आएर सडक निर्माण गरेको बताउछन् । ‘चीनले सीमासम्म सडक पु¥याइसकेको छ’, उनले भने, ‘अहिले हाम्रो विवादित भूमि हुँदै भारतले पनि लिपुलेक नजीकै सडक पु¥याएको हो ।’ हाम्रोतिर सडक निर्माण हुन नसकेका बेला भारतले एकतर्फी सडक निर्माणको भने दार्चुलावासीले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् ।––रासस
भारतमा स्थगित कक्षा १० र १२ को परीक्षा जुलाई १ देखि हुने
भारतमा कोरोनाभाइरस संक्रमणका कारण अवरुद्ध भएको कक्षा १० र १२ को परीक्षा आगामी जुलाई १ देखि हुनेभएको छ । केन्द्रीय माध्यामिक शिक्षा बोर्ड अन्तर्गतको सो परीक्षा आगामी जुलाई १५ सम्ममा सम्पन्न गरिने तय भएको छ ।
केन्द्रीय सरकार अन्तर्गत रहेर लिइने केन्द्रीयस्तरको यो परीक्षा सार्वजनिक तथा निजी दुवैथरी विद्यालयका छात्रछात्राहरुकालागि महत्वपूर्ण मानिने गर्छ । “विद्यार्थीहरुको अत्यधिक चासो र चिन्ताको विषय बनेको यो परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ,” केन्द्रीय जनशक्ति मन्त्री रमेश पोख्रियाले शुक्रबार भने ।
कोरोनाभाइरसको संक्रमण फैलिन थालेपछि सरकारले देशव्यापी लकडाउनको घोषणा गरेकाले यसअघि परीक्षा हुन सकेको थिएन । भारतमा अहिले पनि देशव्यापी लकडाउन कायमै छ ।––एएनआई । रासस
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले विश्वका जुनसुकै क्षेत्रमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई सरकारले उद्धार गर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उनले अलपत्र नागरिकलाई उद्धार नगर्ने भन्ने सरकारको कुनै मनसाय नरहेको पनि प्रष्ट पारे ।
“हामी नेपाली हौँ, कुनै पनि नेपाली देश वा विदेशमा अलपत्रमा परेको छ भने हामी संवेदशनीलताका साथ उनीहरुलाई उद्धार गर्छौं”, अलपत्र नेपालीलाई उद्धार गर्ने मावनीय विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “अलपत्र नेपालीलाई स्वेदश ल्याउन सरकारको तर्फबाट कुनै कसर बाँकी राखिँदैन ।”
सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाई सरकारले सकारात्मक रुपमा लिएको बताउँदै उनले कोरोना प्रभावित मुलुकबाट उद्धार गरेर ल्याउँदा अन्य नागरिकलाई असर नपर्ने गरी ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । “नेपाललाई सुरक्षित राख्नुपर्छ, विदेशबाट नेपाली ल्याउँदा भावनामा बगेर मात्रै हुँदैन”, मन्त्री यादवले भने, “नेपालमा सङ्क्रमण फैलने अवस्था आउन नदिन उनीहरुलाई सम्बन्धित मुलुकमा नै स्वास्थ्य परीक्षण गरी कोभिड–१९ संक्रमण नभएको सुनिश्चित गरेर भित्रियाउनुपर्छ ।”
विदेशमा कति नागरिक छन् भन्ने एकीन तथ्यांक नहुँदा समस्या भइरहेको भन्दै उनले विदेशमा रहेका सबै श्रमिकको दर्ता गर्ने कामको थालनी गरिएको बताए । “कुन देशका कहिले गएको हो, के काम गर्ने हो ? उनीहरुको रहदानीदेखि नागरिकता नम्बरसम्म विवरण रहेका प्रश्नावली बनाएर पठाएका छौँ”, उनले भने, “उसको सीप के हो ? कति दिन देखि काम गरेको हो, कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएको हो वा होइन भन्ने सबै विवरण भर्न मिल्ने गरी फारम बनाएका छौँ ।” परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत श्रमिकको दर्ता गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको उनले जानकारी दिए ।
बैठकमा समितिका सदस्य देवेन्द्र पौडेलले परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई नेपाल सरकार हाम्रो साथमा छ भनेर विश्वस्त पार्न सक्नुपर्ने बताए । “खाडी र अन्य मुलुकमा त्रास कायमै छ, नेपाली आतङ्कित भएको खबर सार्वजनिक भइरहेका छन”, उनले भने, “अहिल्यै सबै नागरिक फिर्ता ल्याउन सकिँदैन तर सम्बन्धित मुलुकसँग कूटनीतिक पहल गरेर आपतमा परेका नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने ढङ्गबाट काम गर्नुपर्छ ।”
सांसद बिन्दा पाण्डेले कोभिड–१९ का कारण अलपत्र परेर नेपाल आउन चाहनेको यकिन तथ्याङ्क कुनै पनि निकायले दिन नसक्दा जोखिमपूर्ण अवस्थामा कति नागरिक छन् भनेर भन्न नसकिएको बताइन ।
विदेशमा अलपत्र गर्भवती, बच्चाका आमा, अवैधानिक बसोबास गरिरहेका, बिरामी तथा विद्यार्थीको तथ्याङ्क तत्काल संकलन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सम्बन्धित मुलुकमा रहेको नेपाली नियोग र गैरआवासीय नेपाली संघले जोखिमम रहेको नागरिकको पहिचान गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद सुजाता परियारले विदेशमा रहेका नेपालीको सही तथ्यांक सरकारले दिन जरुरी रहेको भन्दै अलपत्र नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन सरकारको तर्फबाट कस्तो पहल भइरहेको भन्दै जिज्ञासा राखेका थिए । विदेशमा रहेका कतिपय नागरिक कोरोना संक्रमित भए पनि उपचार पाउन नसकेको गुनासो आइरहेको भन्दै उनले तत्काल कूटनीतिक पहल गरी उपचारको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे । ––रासस
संघीय संसदको छैठौँ तथा बजेट अधिवेशन शुक्रबारबाट सुरु भएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अधिवेशन आह्वान सम्बन्धि पत्र पढे लगत्तै अभिवेशन प्रारम्भ भएको हो ।
बैशाख २१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबारका लागि संसदको छैठौं अधिवेशन आह्वान गरेकी थिइन । जेठ १५ गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने सैवैधानिक व्यवस्थाका कारण कोरोना भाइरसको महामारीका बीच पनि अधिवेशन सुरु भएको हो ।
अधिवेशन सुरु हुनुअघि स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण उपायहरु अपनाइएको छ । बजेट ल्याउनु अघि संसदमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुपर्ने छ । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि बजेट) माथि समेत संसदमा छलफल हुनेछ ।
त्यस्तै सरकारले आगामी वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण पनि प्रस्तुत गर्ने छ भने जेठ १५ गते बजेट पेशगर्ने छ । संघीय संसदको पाँचौं (हिउँदे) अधिवेशन गत चैत २४ गते अन्त्य भएको थियो । कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले देशभर लकडाउन लागु गरेपछि हिउँदे अधिवेशन छिटै अन्त्य गरिएको थियो ।
संघीय संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यसूची अनुसार बैशाख २८ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि बजेट) प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । जेठ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछिन । त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुनेछ । यसैगरी जेठ १३ गते अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत कार्यक्रम रहेको छ ।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा÷राष्ट्रियसभा)का सांसद तथा कर्मचारीको कोभिड–१९ को स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा वासुदेव पाण्डेले बिहीबार परीक्षण गराएका सबै ४३४ को रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जानकारी दिए ।
ती मध्ये २१२ सांसद र बाँकी संसद् सचिवालयका कर्मचारी थिए ।
उनीहरु सबैको संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा स्वाब सङ्कलन गरी पिसिआर परीक्षण गरिएको थियो । शुक्रबारबाट संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन शुरु हुँदैछ ।
कोरोनोको जोखिम हुन नदिन सांसद र कर्मचारीको अनिवार्य पिसिआर परीक्षण गरिएको थियो ।महाशाखा निर्देशक डा पाण्डेका अनुसार बिहीबार परीक्षण नभएका सांसदको आज पिसिआर परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरिएको छ ।––रासस
आज पनि सांसदहरुको स्वाब संकलन गरियो
शुक्रबार पनि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिसभाका ६३ जना सांसदहरुको पिसिआर परीक्षणका लागि थ्रोट स्वाव संकलन गरिएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाका ५३ र राष्ट्रियसाका १० गरी ६३ जनाको स्वाव संकलन गरिएको हो ।
बजेट अधिवेशन सुरु हुनुअघि हिजोबाट सांसदहरुको स्वाव संकलन भइरहेको छ । हिजो २ सय १२ जना सांसदहरु स्वाव संकलन गरिएको थियो । हिजो प्रतिनिधिसभाका १७९ र राष्ट्रियसभाका ३३ जना गरी जम्मा २ सय १२ जना सांसदहरुको स्वाव संकलन गरिएको थियो ।
अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभातर्फ २ सय ३२ र राष्ट्रियसभातर्फ ४३ जनाको स्वाव संकलन गरिएको छ । बजेट अधिवेशन सुरु हुनुअघि सांसदहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको हो । अहिलेसम्म संघीय संसदका सांसद, कर्मचारी, मर्यादापालक र सुरक्षाकर्मी गरी ६ सय ९२ जनाको स्वाव संकलन भएको छ ।
हिजो ४ सय ४१ र आज २ सय ५१ जनाको स्वाव संकलन भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । अझै ५४ जना सांसदहरुको स्वाव संकलन हुन बाकी रहेको छ । शुक्रबारबाटै संसदको बजेट अधिवेशन सुरु हुँदैछ । अधिवेशन सुरु हुनुअघि नै सांसदरुको रिपोर्ट आउने छ । स्वास्थ्य रिपोर्ट देखाएर मात्रै संसद भवनमा सांसद, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई प्रवेश दिइनेछ ।
दिल्लीमा पछिल्लो २४ घण्टामा हालसम्मकै उच्च संक्रमित, संक्रमितको संख्या…
भारतमा कोरोना भाइरसबाट ५२ हजार भन्दा बढि मानिस संक्रमित भइसकेको छन् भने १७५० व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ । यसैबीच राजधानी दिल्लीमा पछिल्लो २४ घण्टामा हालसम्मकै अधिक नयाँ संक्रमित थपिएका छन् ।
केजरीवाल सरकारले जारी गरेको ताजा तथ्याँक अनुसार दिल्लीमा वितेको २४ घण्टामा ४४८ नयाँ केस देखिएको हो । यो सँगै दिल्लीमा कोरोना भाइरसको ५९८० केस सामुन्ने आएको छ । हाल सम्म ६६ मानिसको ज्यान गइसकेको छ ।
त्यसैगरि पछिल्लो २४ घण्टामा ३८९ विरामी निको भएका छन् । २४ घण्टामा ठीक भएकाको हालसम्मको उच्च संख्या रहेको पनि दिल्ली सरकारले जनाएको छ । हाल सम्म दिल्लीमा कोरोना संक्रमित मध्ये १९३१ निको भएर फर्किएका छन् । दिल्लीको रिकभरी रेट ३२.२९ प्रतिशत रहेको छ ।